ငွေဝင်ကံကောင်းစေမယ့် သကြားပေါ် သစ်ကြားတင် လာဘ်ပွင့်အစီအရင် - Amawpyay
မိတ်ဆွေများ အားလုံး မင်္ဂလာ ပါ ခုလို အချိန်ကာလမှာ အကြပ်အတည်း အခက်အခဲများအကြား အဆင်မပြေမှုများ ကံပိတ်လာဘ်ပိတ်ဖြစ်နေ သူများ အစစအရာရာ အဆင်မပြေမှုများလုပ် ထားသော အလုပ်များ အခိုက်အတန့် အဆင်မပြေမှုများ အတွက် ဆရာ ယတြာတခုမျှဝေ ပါရစေ
သောကြာနေ့ မနက် ၇နာရီမှ ၇နာရီ ၂၅မိနစ်အတွင်း မိမိအိမ်က ဘုရားကျောင်းဆောင်တွင်ပန်းကန် ပြားတချပ်ပေါ်၌ ဘေးပတ်ပတ်လည် တွင် ဝလုံးပုံ ဖြူးပေးပါ။
သကြားပေါ်တွင် သစ်ကြားသီး ၆လုံး (ပုံပါအတိုင်း)တင်ပြီး အလယ်တည့်တည့်တွင် ဖယောင်းတိုင် အဖြူ အသေး ၁တိုင်ထွန်းပြီး အောက်ပါ ဂါထာကို ၂၇ ခေါက် ရွတ်ဆိုကာ စီးပွားလာဘ်လာဘ အဆင်ပြေစေကြောင်း ဆုတောင်းပါ
” ဥုံပထဗျာ အာကာသေ ပဗ္ဗတေစေန ဥဒကေ
ဝနေ ယံယံ ပတ္တံပဝါဒေမိ သဗ္ဗလာဘသိဒ္ဓိ
သောကြာနေ့ မှစ၍ ၆ရက်တိတိ ထို အချိန်အခါ အတိုင်း အစအဆုံး ပြုလုပ် ပါ။ ၆ရက်ပြည့်ပြီးနောက် ရက်တွင် သကြားနှင့် သစ်ကြားသီး များကို အိမ်က လူများစားသုံးနိုင် ပါသည်။ .( စွန့် ပစ် လို့ လည်း ရ ပါ တယ်)
ဤယတြာပြုလုပ် ရခြင်း အကျိုးအားကြောင့် မိတ်ဆွေများအားလုံး စီးပွား လာဘ်လာဘများ တိုးတက်အောင်မြင် ကြပါစေ………
ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ပညာရှင် ဆရာကျော် M.Sc (bot)
ငှဝေငျကံကောငျးစမေယျ့ သကွားပျေါ သဈကွားတငျ လာဘျပှငျ့အစီအရငျ
မိတျဆှမြေား အားလုံး မင်ျဂလာ ပါ ခုလို အခြိနျကာလမှာ အကွပျအတညျး အခကျအခဲမြားအကွား အဆငျမပွမှေုမြား ကံပိတျလာဘျပိတျဖွဈနေ သူမြား အစစအရာရာ အဆငျမပွမှေုမြားလုပျ ထားသော အလုပျမြား အခိုကျအတနျ့ အဆငျမပွမှေုမြား အတှကျ ဆရာ ယတွာတခုမြှဝေ ပါရစေ
သောကွာနေ့ မနကျ ၇နာရီမှ ၇နာရီ ၂၅မိနဈအတှငျး မိမိအိမျက ဘုရားကြောငျးဆောငျတှငျပနျးကနျ ပွားတခပျြပျေါ၌ ဘေးပတျပတျလညျ တှငျ ဝလုံးပုံ ဖွူးပေးပါ။
သကွားပျေါတှငျ သဈကွားသီး ၆လုံး (ပုံပါအတိုငျး)တငျပွီး အလယျတညျ့တညျ့တှငျ ဖယောငျးတိုငျ အဖွူ အသေး ၁တိုငျထှနျးပွီး အောကျပါ ဂါထာကို ၂၇ ခေါကျ ရှတျဆိုကာ စီးပှားလာဘျလာဘ အဆငျပွစေကွေောငျး ဆုတောငျးပါ
” ဥုံပထဗြာ အာကာသေ ပဗ်ဗတစေနေ ဥဒကေ
ဝနေ ယံယံ ပတ်တံပဝါဒမေိ သဗ်ဗလာဘသိဒ်ဓိ
သောကွာနေ့ မှစ၍ ၆ရကျတိတိ ထို အခြိနျအခါ အတိုငျး အစအဆုံး ပွုလုပျ ပါ။ ၆ရကျပွညျ့ပွီးနောကျ ရကျတှငျ သကွားနှငျ့ သဈကွားသီး မြားကို အိမျက လူမြားစားသုံးနိုငျ ပါသညျ။ .( စှနျ့ ပဈ လို့ လညျး ရ ပါ တယျ)
ဤယတွာပွုလုပျ ရခွငျး အကြိုးအားကွောငျ့ မိတျဆှမြေားအားလုံး စီးပှား လာဘျလာဘမြား တိုးတကျအောငျမွငျ ကွပါစေ………
ဗဒေငျနှငျ့လက်ခဏာ ပညာရှငျ ဆရာကြျော M.Sc (bot)